Misokatra = Fitomboana | Martech Zone
Misokatra = Fitomboana
Alahady, Jolay 24, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia niara-niasa tamin'ny ekipam-pirenena NFL aho hanombatombana ny tahirin-kevitra sy ny fitaovana marketing amin'ny mailaka. Izany dia fanombantombanana feno momba ny fitaovana marobe am-pelatanan'izy ireo. Ny faritra nifantohany ny saiko dia:
Fahaizana mampiditra vahaolana ivelany
Fahafahana mandeha ho azy ny fizotrany
Hanamaivana ny fampiasana
Ny andraikitry ny orinasa amin'ny alàlan'ny fitantanana kaonty sy fanohanana
Ny roa voalohany dia tombony ho an'ny ho avy. Te hanana antoka aho fa miasa miaraka amin'ny vahaolana izay mandray ny fampidirana sy mandeha ho azy ny fikambanana, na dia mety tsy ho izany aza ny endrik'izy ireo ankehitriny hatramin'ny fifaninanana. Adihevitra sarotra ny fampahafantarana ny olona, ​​fa ny orinasa kosa manana ny fahaiza-manao fototra. Rehefa manomboka miasa ivelan'ny fahaiza-manao fototra izy ireo mba hiteraka fidiram-bola fanampiny, dia manomboka manalefaka ny vokatra fototra izy ireo ary mety hanana safidin'ireo vokatra manankarena, saingy ratsy endrika, tohana ary fanavaozana.
Miova ny tontolon'ny teknolojia ankehitriny. Aleoko manondro ireo orinasa hanokatra teknolojia afaka mandeha ho azy sy mampiditra tsara fa tsy vokatra manankarena.
Tamin'ny farany, nandray ny torohevitro ny orinasa. Raha tokony hiasa amin'ny vahaolana tokana izy ireo dia nanomboka niasa tamin'ny vahaolana telo samihafa, ary ny iray hafa izay tsy misy amin'izao fotoana izao, dia eo akaiky eo ihany. Ny tapakila ataon'izy ireo dia vita ao amin'ny rafitry ny tapakila, ny Fifandraisan'ny Fifandraisan'ny mpanjifa dia atao ao amin'ny rafitry ny CRM (Salesforce), ary ny vahaolana amin'ny marketing amin'ny mailaka dia vita ao amin'ny Solution Marketing Marketing (Exacttarget). Ny vahaolana faha-3 dia vahaolana momba ny fonenana an-tserasera, zavatra mbola tsy hitantsika hatramin'izao.
Tao anatin'ny herinandro nanatontosana voalohany dia nandefa mailaka teo am-baravarana izahay hanatsarana ny fifandraisana amin'ireo mpihazona Ticket Season anay Ankehitriny izahay dia miasa amin'ny fampidirana ny angon-drakitry ny tapakila amin'ny CRM… ny fanamby dia ny hoe tsy mifankahazo am-pitiavana ny rafitra tapakila. Mampalahelo izany ary hita ho sakana amin'ny fanatsarana hatrany ny fizotrany.
Ny orinasam-pifandraisana dia mety te-handinika ny paikadin'izy ireo ary hifikitra amin'ny fahaizany fototra, raha tsy izany dia hisy olon-kafa ho avy miaraka amin'ny vahaolana hilalao tsara ka hisolo azy ireo.
Tags: APIfampiharana interface tsarafitomboanarindrambaiko natambatrafampidiranarindrambaiko misokatra
Ny zava-pisotro maraina vaovao - ando-tendrombohitra?